Izimpendulo ezisheshayo kumbuzo wakho we-SEO ovame ukubuzwa
Ukwenza isayithi lakho libonakale ku-SERP, kufanele wazi okungaphezulu kakhulu kuncazelo yesikhathi se-injini yokucinga nokuthi ingathinta kanjani isikhundla sakho. Ukuze wakhe umkhankaso wokwenza umsebenzi wokuwina noma uqaphele umsebenzi ochwepheshe bakho be-SEO, udinga ukuthola ulwazi olujulile mayelana nemigomo nezindlela zokusebenzisa iwebhusayithi. Ngakho ake sikhulume nge-SEO ebalulekile izinto eziningi abaqalayo abanemibuzo mayelana nendlela yokuthuthukiswa kwewebhusayithi kodwa ungaqiniseki ukuthi ngubani ozocela ukucaciswa.
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana ne-SEO
Uyini umehluko phakathi kokusesha okuhleliwe nokukhokhelwe?
I-Pais noma imiphumela engavamile yokusesha yilezo ezivela ekhasini le-TOP le-SERP futhi zibe nezimpawu ". "Kwezinye izimo, le miphumela ingavela futhi eceleni kwekhasi le-SERP. Lezi yizizinda abakhangisi abazikhokhayo ukuze bavele e-TOP zezinjini ezahlukene zokufuna imibuzo yomsebenzisi efanele. Ukuze uthole usesho olukhokhelwayo, awudingi ukuqhuba umkhankaso wokwenza ngcono. Konke okudingayo ukukhokha ukuchofoza komsebenzisi ngamunye kusikhangiso sakho. Lolu hlobo lesikhangiso esikhokhelwayo lubizwa ngokuthi ukukhangisa nge-pay-per-ukukhangisa futhi lisetshenziselwa ukuheha izivakashi ezintsha kusuka kusesho nokuphakamisa izinga lokuchofoza.
Ukusesha okungokwemvelo noma okungakhokhelwa kubhekisela emiphumeleni yemvelo evela ezinjini zokusesha ngokusebenzisa izinga eliphezulu lewebhu. Umthombo wewebhu obeka kwi-TOP kokusesha okungahleliwe ungahlukaniswa ngokubaluleka kwawo, ikhwalithi, nokuhleleka kwe-SEO. I-website ephezulu ye-TOP kufanele ithuthukiswe ngokuvumelana nazo zonke izindinganiso zenjini yokusesha. Ngokuhola usesho lwezinto eziphilayo, uphakamisa amathuba akho wokuthuthukisa ukuqwashisa umkhiqizo wakho nokuheha ithrekhi yekhwalithi ezoguqula ekuthengiseni.
Ngingakanani okufanele ngikhokhele amasevisi we-SEO?
Intengo yamasevisi okucinga nge-intanethi ingahluka ngokumangalisayo ngokusho kohlobo lwebhizinisi lakho, i-niche yakho yemakethe kanye nobukhulu bokusebenza (indawo, izwe, jikelele). Ngaphezu kwalokho, intengo ixhomeke kumphathi wezinsizakalo zokuhlinzeka ngamasevisi nokwaziswa. Uma ihlala isikhathi eside eyaziwa kakhulu ejensi lokudayiswa kwedijithali yomhlaba, cishe cishe izindleko zezinsizakalo zazo zizoba ngaphezulu kunezinga lemakethe elijwayelekile. Noma kunjalo, zonke izimali zakho zizokhokhwa ngezikhawu. Yingakho akufanele ube nokungabaza ngemali yomkhankaso wokukhwalisa ikhwalithi.
Ungawi izinkampani ezinikela nge-SEO ngamanani angabizi kakhulu. Ezimweni eziningi, kukhona indlela engenzi lutho nokukhwabanisa ngemuva kwayo. Ngokuvamile, lezi zinkampani zisebenzisa amasu we-SEO amnyama-mnyama ukuze kutholakale umphumela osheshayo. Noma kunjalo, kungaholela ezenzweni ze-Google kanye ne-rankings yehle.
Uma ngiqala i-SEO, kufanele ngilinde kangakanani ukuhlola imiphumela emihle yokuqala?
I-SEO yinkqubo echitha isikhathi esidinga isikhathi nemizamo. Awukwazi ukusebenza ebusuku. Kuthatha amasonto ayisithupha kuya kwangu-9 ukufeza wonke amasu okubaluleka we-SEO nezinyanga ezimbalwa ngemuva kokuthi zonke izichibiyelo zinikezelwe ekubuyekezeni ukukhangisa. Abashayeli benjini yokusesha badinga isikhathi sokubheka futhi babhale izinguquko zewebhusayithi yakho ukuze uthole isayithi lakho endaweni ephakeme ku-SERP. Kuye nge-niche yakho yemakethe, ubungako besayithi kanye nekhwalithi yokusebenza kahle, kuthatha kusukela ku-6 ukuya ku-9 inyanga ukuqala ukuhlola imiphumela yokuqala ye-SEO Source .